समय मिल्यो, साँझको ७ बजे । स्थान शंकरदेव क्याम्पस नजिकैको क्याफे । समय तोकेका थिए आधा घण्टा । दिमागमा प्रश्नका जालो गुजुल्टिएका थिए । आधा घण्टामा ती सबै जालो खुल्लान् र ! क्याफे सामान्य नै थियो । भिडभाड जमेको । तस्बिर देखिरहेकाले चिनिहाले कवि नवराज पराजुलीलाई । भिडको कुनातिर झ्याप्प दाह्री, नीलो हुक्स अनि खरानी रङको पेन्टमा थिए उनी । उनी मुसुक्क हाँसे ! ‘तपाईं नै हो ?’ सोधे । भनेँ, ‘अँ ।’ ……………. २०४३ माघ २८ मा झापाको मंगलबारेमा जन्मिएका पराजुलीको बाल्यकाल झुम्राको बल र गुच्चा खेल्दैमा बित्यो । परिवारको आयस्रोत कृषि ।
समयलाई पिसेर बनाएको सातुजस्तै लाग्नेछन्…